တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ လေးနာရီ – Grab Love Story
ကျွန်နော့် မန်နေဂျာ ( ဂျာကြီး ) ကိုတော်တော် တင်းနေပီဗျာ ။ ကျွန်နော့် ပရောဂျက် တစ်ခု ကို တင်ပြတယ် ။ သူသဘောကျတယ် ဒါကို သဘောမကျသလို ကလဲ ပြောသေးတယ် ဘာလိုတယ် ညာလိုတယ် နဲ့ ။ ထားပါ ဒီလိုပြောတာကတော့ လူကြီးတော်တော် များများ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ကျွန်နော် သဘောပေါက်တယ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဗျာ အမ်ဒီ တင်ပြတဲ့ အခါ ဒီပရောဂျက် ကို သူပဲ ဆွဲထားသလိုလို သူကိုယ်တိုင်ပဲ အပင်ပန်းခံထားရသလို တင်ပြတယ် ။ အမ်ဒီက ကျွန်တော့ ပရောဂျက်ကို လက်ခံလိုက်တယ် ။ ပရောဂျက် တစ်ခု အောင်မြင်သွားတော့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးအဖွဲ့ တွေ ပျော်ကြတာပေါ့ ။ ဂျာကြီးကတော့ ရုံးအဖွဲ့သားတွေ ရှေ့မှာ ကျွန်နော့် ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တောင်မပြောဘူး ။ ကျွန်တော့မှာ မအိပ်မနေ အပင်ပန်းခံပီး ကြိုးစားခဲ့လိုက်ရတာ ။ ကျွန်နော် တော်တော် ဒေါသ ဖြစ်မိတယ် ။ ဒေါသ ဖြစ်တိုင်းလည်း ဒေါသထွက်မိရင် ကျွန်နော့် အလွန် ဖြစ်ဦးမယ် ။ ဒီအလုပ်က လည်း ကျွန်နော် မထွက်ချင် ။
ဂျာကြီး နာမည် က ဦးဇော်ဝင်းနိုင် ၊ အသက်က လေးဆယ်ငါးလောက်ရှိပီ ။ တော်ကီကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ် ကျွန်နော်တို့ လူငယ်တွေ လိုက်မမှီ ။ တချို့ ကပြောတယ် ဂျာကြီး စကားပြောလိုက်ရင် စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူတောင်ပြုံးရယ်သွားတယ် ။ ယောကျားအချင်းချင်း တောင် ဖင်ခံချင်သွား အောင် ပြောတတ်တယ် ဆိုပီး ပြောကြတယ်သေးတယ် ။ တကယ်လည်း တော်ကီ တော်တော် ကောင်းပါတယ် ။ ကျွန်နော် သူ့ကို ဒေါသဖြစ်ပီး သွားရှဲလိုက်လို့ သူ့တော်ကီအောက်မျောပီး ကျွန်နော်ပါ ဖင်ပိတ်ပီး ပြန်လာရမှာ ကြောက်လို့ ( ဟီးးးးး) ဒေါသတွေ မျိုချပီး ပါးစပ်ပိတ်ပီး ပဲ နေလိုက်တော့တယ် ။ ဘယ်လို တော်ကီတွေ ပစ်ပီး ဖန်ထားလဲတော့ မသိဘူး သူ့ မိန်းမ က သူရုပ်ရည်နဲ့ မလိုက်အောင် ချောတယ် ။ ကချင်မ လုံးကြီးပေါက်ကြီး ၊ အသက်က ၃၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ။ သူ့မိန်းမ ဘက်က လည်းချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ။ သူ့ မိန်းမ လည်း သူ့တော်ကီ ကြားဝင်သွားပီး ဖင်ခံပီး ယူလိုက်ရတာ ဖြစ်မယ် ။ သူ့မိန်းမ နဲ့ ကျွန်နော် ခနခန ဆုံဖူးပါတယ် ။ တကယ်လုံးကြီးပေါက် မင်းကြီးကြိုက်ကြီး အသက်က သာ သုံးဆယ်လောက် ဆိုပေမယ့် နေထိုင်တာကတော့ တကယ် လူကြီးစတိုင်လ် ။ မြန်မာဝတ်စုံ ခါးတို များ ၀တ်ထားလိုက်ရင် တော်တော်ကြည့်ကောင်းဗျ ။ တချက်တချက် ဘိုက်သားဖွေးဖွေးလေး များ ပေါ် သွားတာမျိုး ကျွန်နော် မကြည့်ပဲ မနေနိုင် ။ မြင်အောင်ပြောရရင် မင်းသမီးနန္ဒာလှိုင်ရဲ့ Grand Royal အရက်ကြော်ငြာပိုစတာထဲမှာ မြန်မာဝတ်စုံ အနက်လေး နဲ့ ရိုက်ထားတာ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့ ။ ရုပ်ချင်မတူပေမယ့် အဲ့လို ဆိုဒ်မျိုးဗျ
ဖင်အိုးကြီးကြီး နို့တင်းတင်း နဲ့ အသားဖြူဖြူ ကချင်မ ။ စကားက သ´´ နဲ့တ ´´ နဲ့ မကွဲဘူး ။ နုတ်ခမ်းလေးက လည်း မထူမပါး ။ မျက်ခုံးကော့ကော့ ဖြင့် တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတယ် ။ ချစ်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာ ထက် ကြိုက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရမလား။
အပြင်ထွက်ရင် မြန်မာ ဆန်ဆန် ပဲ ၀တ်တတ်တာများတယ် ။ အိမ်နေရင်း ဆိုရင် ဂါဝန်ပွပွကြီး နဲ့ ။ကျွန်နော်က အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ သူတို့ အိမ်ခနခန ရောက်ဖြစ်တော့ ကျွန်နော် နဲ့လည်း ရင်းနှီးနေတယ် ။ ဂျာကြီးနဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ က သိပ်သာ မျက်နှာကြောမတည့်တာ အလုပ်ကိစ္စ ဆို ကျွန်နော့် ကို ပဲ သူယုံကြည်တော့ တော်တော် များများ ကိစ္စတွေ ကျွန်တော့ကို ပဲ ခိုင်းတတ်တယ်။
မျက်နှာသာတော့မပေး ။ သူတို့မှာ လေးနှစ်အရွယ် သားလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် ။ တော်တော်မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တဲ့ကောင် ။ အလုပ်ကိစ္စ ရှိလို့ သူ့အိမ်ကို ရောက်ရင် ကျွန်နော် ကောင်းကောင်းမထိုင်ရ ။ခေါင်းပေါ်ထိ တက်ဆော့တယ်ကောင် ။ သူ့ အိမ်သွားရင် ဘောင်းဘီဝတ်သွားရတယ် ပုဆိုးဝတ်ထားရင်လည်း ခိုင်ခိုင်သာ စည်းထား ။ သူတို့နေတဲ့ အိမ်နဲ့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးနဲ့ နဲနဲ တော့ အလှမ်းဝေးတယ်ဗျ ။ ပိုက်ဆံရှိတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေပဲ သူတို့ အိမ်မှာ သူတို့နေကြတယ် ။ ရုံးကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် နာရီဝက် ကျော်လောက် မောင်းရတယ် ။ ခြံနဲ့ဝန်း နဲ့ တထပ်တိုက်ပုလေး ဆောက်ထားတယ် ။ အိမ်းလေး က နေချင်စရာလေး။
တစ်နေ့ ( တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ လေးနာရီ ) ကျွန်နော့် ပရောဂျက် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပီး ရှင်းလင်းစရာတွေ ရှိတာနဲ့ ဂျာကြီး အိမ်ကို စီးတော်ယာဉ် ဆိုင်ကယ်လေး ဖြင့်သွားခဲ့တယ် ။ ခြံရှေ့ ရောက်တော့ လူခေါ်ဘဲလ် တီးလိုက်ပီး စောင့်နေတာ ခနနေတော့ ဂျာကြီးမိန်းမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဂါဝန်ပွပွ ကြီး နဲ့ တခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။
ဟော …မောင်လင်းနိုင် ဘာကိစ္စတုန်း လာအိမ်ထဲဝင်´´ ဟုတ်ကဲ့အမ ကျွန်နော် ပရောဂျက်ကိစ္စ တွေ ရှင်းမလို့ပါ မနက်ဖြန် ပရောဂျက် ကိစ္စ အစည်းအဝေး ရှိလို့ပါ ´´
အော် ..အေးးအေးး လာထိုင်ဦး အမ ကော်ဖီ သွားဖျော်လိုက်ဦးမယ် မင်း ဆရာ က ဂေါက်ဖ် သွားရိုက်တယ် သူမေ့နေတာလားမသိဘူး အမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ် ´´ ဟုတ်ကဲ့အမ ´´
ကျွန်နော့် ရှေ့ကနေ ကော့ပတ် ကော့ပတ် နဲ့ နောက်ခန်းထဲကို ၀င်သွားတယ် ။ ဂါဝန် အပွကြီး ၀တ်ထားတာတောင် နောက်အိုးဆုံကြီးက ကော့ထွက်နေတာပဲ ၊ အိမ်မှာ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ဟိုမျောက်လောင်းလေး မရှိဘူးလားမသိ ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စကိုင်းနက်က ကိုးရီးယားဇတ်လမ်းတွဲ ကြည့်ရင်း ကျွန်နော် ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ကော်ဖီခွက်တခွက် ကိုင်ရင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပြန်ထွက်လာတယ်
မင်း ဆရာက စောင့်ပါဦးတဲ့ သူ ဂေါက်ဖ် ရိုက်ရင်းတန်းလန်း နဲ့ မို့တဲ့ လူကြီးတွေလည်း ပါလို့ နောက် ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမယ်တဲ့´´ အော် ..ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် စောင့်ရမှာပေါ့ အခုရှင်းခဲ့မှ ဖြစ်မှာ မနက်ဖြန် အမ်ဒီကို ပြန်ရှင်းရမှာမို့လို့ပါ ။ ဒါနဲ့ သားလေးမတွေ့ပါလား´´
မင်းတူက ကျောင်းပိတ်ရက် သူ့ အဘိုးတွေဆီ ပို့ထားတယ် တပတ်ကျော်ပီ သူမရှိတော့လည်း ပျင်းစရာ အမလည်း ပျင်းနေတာ တနေ့တနေ့ ကိုးရီးယားကားပဲ ကြည့်နေရတယ် ´´ ကော်ဖီတောက်ဦး ငါ့မောင် ´´
(သူ့စကားအတိုင်း သ´´နဲ့တ´´မပီတမူရင်းအတိုင်း ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဗျာ)
ကျွန်နော် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်တီမှာ တင်ပလင်ချိတ်ထိုင်ရင်း ကျွန်နော် နဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ် ။ တင်ပါလင်ချိတ်ထိုင်ထားတော့ ဂါဝန် စ ကို ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကြား ညှပ်ထားတယ် ။ အောက်က ခြေသလုံးသား တွေက ဒူးနားမရောက်တရောက် ။ ခြေသလုံးသား က ဖွေးဥနေတာပဲ ။ သေချာကြည့်ရင် မွှေးညှင်း နူနုလေးတွေတောင်မြင်နေရတယ် ။ သေသေချာချာကြီးတော့ မကြည့်ရဲ ကျွန်နော့် ဂျာကြီး ရဲ့ မိန်းမ ကိုးးး ။ သူကလဲ ဘယ်လို အနေအထားမှန်းမသိ ။ ဂါဝန်က လက်ပြတ်ဂါဝန် ဆိုတော့ တချက်တချက် ဂျိုင်းအောက်က ပေါ်ပေါ်သွားပီး ဘော်လီစ အပြာနု ရောင်လေး လှမ်းတွေ့ရသေးတယ် ။ ဆံပင်တွေကို နောက်လှန်စည်းထားပီး မျက်နှာမှာ ဘာမှ မလိမ်းထား ။ အပြင်ထွက်တိုင်း တမျိုးပီးတမျိုး ပြောင်း ၀တ်တတ်တဲ့ ဆွဲကြိုးတွေ နားတောင်းတွေ ဘာတစ်ခုမှ မ၀တ်ထားဘူး ။ မျက်နှာအသားဖြူဖြူလေး က ရှင်းပီး ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ ။ သူနဲ့သာ စကားတွေ ပြောနေတာ ကျွန်နော် စိတ်ထဲကတော့ စားနေကျ အကျင့် အတိုင်း ဒေါ်မာမာခိုင် ကို စိတ်နဲ့ ပြစ်မှား နေမိပီ။ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ အဲ့ဒီကိစ္စ မလုပ်ဖြစ်တာလဲ ကြာတော့ အောက်က သကောင့်သား က ထကြွချင်နေတယ်။ ကျွန်နော် ရှိုးနေတာ ကို သတိထားမိလို့လား မသိ တချက်တချက် ကျွန်နော့် မျက်လုံးတွေ ကို စိုက်စိုက်ကြည့်တယ် ။ တအိမ်လုံးမှာလဲ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နဲ့ ကျွန်နော် နှစ်ယောက်တည်း ။စိတ်တွေ က သောင်းကျန်းနေတယ် ။ ထပြန်ပီး အပြင်မှာ ၂ နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းပီး မှ ပြန်လာ ရမလား ကျွန်နော် တွေးလိုက်သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် မပြန်ဖြစ် ကျွန်နော့် အတွေ့ အကြုံ အရ သူ့ အကြည့်တွေကလည်း တမျိုးပဲ ။
ငါ့မောင် ပျင်းနေပီလား အမ က စကားပြောဖော်မရှိလို့ စကားတွေ လျောက်ပြောနေတာ မင်းဆရာကလဲ အလုပ်ကများ အလုပ်အားရင် ဂေါက်ဖ် သွားရိုက် နဲ့ သားလေး မရှိတော့ အရမ်းပျင်းတာပဲ´´ ရပါတယ် မပျင်းပါဘူး အမ ကျွန်နော် အမ နဲ့ စကားပြောရတာ ပျော်ပါတယ် ဂျာကြီး နဲ့သာ သိပ် အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ဟီးးးဟီးးး´´
ဟုတ်ပ မင်းဂျာကြီးနဲ့လည်း အမ နဲ့ သိပ် အပေါက်လန်းတည့်တာ မဟုတ်ဘူး ကလေးတစ်ယောက်သာ ရသွားတာ´´ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပြောပီးမှာ စကားက အနှောက်အသွားမလွတ်ဖြစ်သွားတာ သတိထားမိသွားတယ်ထင်တယ် စကား အပေါက်အလန်းမတည့်တာပြောတာနော် …ငါ့မောင်´´
ကျွန်နော်လည်း စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ အနေနဲ့ စကားနဲနဲ စကြည့်လိုက်တယ်
ကျွန်နော် လည်းစကားပြောတာ အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ပြောတာပါ … ကျန်တာတော့ အပေါက်အလန်းတည့်လို့ ကလေးတစ်ယောက်ရလာတာပေါ့နော့် ဟီးးး´´ ဟင်းးးဟင်းးး ငါ့မောင်နော် လူပျိုသာ ဆိုတယ် စကားကလဲ´´
ဟီးးး အမ နဲ့ ကျွန်နော်လည်း အပေါက်အလန်းတည့်ပါတယ်နော် ..စကားပြောရတာပါ´´ ဟိတ်…ဟိတ် .. .တော်ပီ စကားပဲ အပေါက်အလန်းတည့် ကျန်တာလာမတည့်နဲ့ ဟင်းးး´´
ကျန်တာလည်း အပေါက်အတန်း တည့်ရရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်´´ ကျွန်နော် ပြောချလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ။ အရင်က သူနဲ့ ကျွန်နော် ၂ ယောက်တည်း စကားသေချာ မပြောဖူး ။ သူမ အနေနဲ့ လည်း ကျွန်နော့် ကို ဒီလောက် ရဲ လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူးထင်တယ် ။ ဟိတ်… ငါ့မောင် စကားတွေ မကျွံ နဲ့နော် မင်းဂျာကြီး သိရင် မင်း အလုပ်ပြုတ်မယ်နော်´´
အမ မတိုင်ရင် မသိပါဘူး ´´ မတိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ´´
အမ မျက်လုံးတွေက ပြောနေတယ်လေ´´ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်လွှာချသွားတယ် ။ အတွေ့ အကြုံအရ ကျွန်နော့် ဘက်က ကိုးဆယ်ဆလောက် သာနေပီ ။ ကျွန်နော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ သိပီလေ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နား ကို ဖြေးဖြေးချင်းတိုးကပ်သွားခဲ့တယ် ။နောက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးရဲ့ ပုခုံး နှစ်ဘက်ပေါ် ကို ကျွန်နော့်လက်နှစ်ဘက် ကျရောက်သွားပီ။ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ခေါင်းကို ငုံထားတယ် ဘာမှမပြော ၊ ပုံခုံးသားလေး တွေ ကို အသာပွတ် ကာ လက်မောင်းရင်းမှ ကိုင်၍ မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပါလာတယ် မကောင်းပါဘူး ..ငါ့မောင်ရယ် ..မင်းဆရာ ပြန်လာတော့မှာ´´
ခါးမှ ဆွဲဖက်လိုက်ကာ နီထွေးထွေး နုတ်ခမ်းတစ်စုံအား ငုံခဲလိုက်တယ် ။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အင့် ..အူးးး ဖလူးးးး´´
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရုန်းဖယ်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်က ခါးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ထားပီး ကျွန်တော်နဲ့ ကိုယ်လုံးချင်း ဆွဲကပ်ထားလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ဘယ်ဘက်လက်က သူ့မ နဲ့ ခေါင်းကို နောက်ကနေ ပြန်ကိုင်ထားပီး ညာဘက်လက်က ဂါဝန်ပါးပါး ပေါ်မှ တင်ပါးတွေကို ပွတ်ပေးနေရင်း နုတ်ခမ်းချင်း မလွတ်တမ်း နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ပါးစပ် ကို အတင်း စေ့ထားပေမယ့် တချက်တချက် နုတ်ခမ်းဟ သွားတဲ့အချိန် ကျွန်နော့် လျှာ နဲ့ သူမ လျှာ ကို လုံးထွေးရစ်ပတ်လိုက်တယ် ။
ပြွတ် ပြွတ် ´´ အင်းးးးဖလူးးးးအူးးးး´´
ကျွန်နော့်ညာဘက်လက်က တင်ပါးအနှံ လျောက်ပွတ်နေရင်း သတိထားမိလိုက်တယ် ၊ အတွင်းခံ မ၀တ်ထားပါလား ။ ဒါကြောင့် ချောမွတ်နေတာကို။ အနမ်းတွေ ကို မရပ်သလို ကျွန်နော့်လက်ကလဲ တင်ပါး တလျောက် ပွတ်ဆွဲရင်း တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြားကို နှိုက်နှိုက်ပေးမိတယ် ။ ထွားလွန်းတဲ့ တင်ပါးတွေကြောင့် ကျွန်နော့် လက်ချောင်းများက တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြား ညှပ်ညှပ်သွားသလို ခံစားမိတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရင်ဘတ် တွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘတ် နှင့် ဖိကပ်နေမိတာကြောင့် သူနို့နှစ်စုံရဲ့ အထိအတွေ့ ကို အောက်ခံ ဘော်လီမှ တဆင့် သိရှိမိတယ် ။
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ အားးး တော်တော့ ကွာ ငါ့မောင် မင်းဆရာသိသွားရင် မိုးမီးလောင်မယ် ´´
မသိပါဘူး မမ ရယ် ဂျာကြီးက ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမှာပဲ ´´ အာာာာ မသိတော့ဘူးကွာ … ပြဿနာ တတ်မှာ ကြောက်တယ်ကွာ´´
ကျွန်နော် ခြံတခါး သွားပိတ်ထားလိုက်မယ် ဂျာကြီး ကား ၀င်လာရင် သိတာပေါ့ ´´ ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းမှ အလောတကြီး ထွက်ကာ ခြံဝန်းတံခါး ကို သော့သွားခတ်လိုက်တယ် ။ ပီးတာ နဲ့ အိမ်ပေါ် တက်လာတော့ ဧည့်ခန်းတွင် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရှိမနေတော့ ၊ အတွင်းခန်းဘက် ၀င်လာလိုက်တော့ အိပ်ခန်းတံခါး စေ့ထားတာ တွေ့လိုက်လို့ တံခါး ကို အသာတွန်းလိုက်တော့ ဂျက်မချထား ၊ အတွင်းခန်းထဲ ကျွန်နော် လှမ်းဝင်လိုက်တယ် ။ မှန်တင်ခုံရှေ့ မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ။ တံခါးကို အသာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ထံ ဖြေးဖြေးချင်းလျောက်လာလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို လှည့်မကြည့် ။ ကျွန်နော် နောက်ဘက်ကနေ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ဖက်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်နှစ်ဘက်လုံးက သူမ ရင်ဘတ် ပေါ် ကို ကွက်တိ တင်ထားရင်း ဂုတ်သားလေးတွေ ကိုနမ်းစုပ်လိုက်တယ် ။ အာ….ယားတယ်ကွာ …အဲ့နေရာ မနမ်းနဲ့ ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲမသိဘူး တမျိူးကြီး ´´
ညူတူတူ အသံဖြင့်ပြောတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တဘက်က နို့အုံတွေကို ကိုင်နေရာမှ အောက်ကို လျောချလိုက်ပီး ပေါင်ခွဆုံကြားကို ၀င်လိုက်တယ် ။ လက်ချောင်းများက နေရာမှန်ကို ကွက်တိ ။
အားးးး မောင်လေးးးး ဖြေးဖြေး ´´ ဂါဝန်စ ပေါ်မှာ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဖုတ်ကြီး ကိုနှိုက်ပေးနေလိုက်တယ် ။ အဖုတ် ထဲမှ အရည်စိုတိုတိုက ဂါဝန်စမှာ စေးကပ်ကပ် ဖြစ်လာပီး ကျွန်နော့် လက်ကို ပါ စိုလာတယ် ။ အားးးးအင်းးးမောင်လေးး ကောင်းတယ် အားးးဖြေးဖြေး ´´
ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီအောက်မှ သကောင့်သား ကလဲ ထန်နေပီ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ်ထားရင်း စောက်ဖုတ်ကို မနားတမ်း ပွတ်ဆွဲပေးနေမိတယ် ။သူမ တင်ပါးကြီးတွေက လည်း နောက်ဘက်ကို ကော့ကော့လာတယ် ။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျွန်နော် သူမ ဂါဝန်စ ကို အောက်မှ ဖြေးဖြေး ချင်း အပေါ် ကို ဆွဲတင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်ကို နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ စောက်ရည်က တော်တော် ရွဲနေပီ ။ ဂါဝန်ကို အပေါ်ထိ ဆွဲမ လိုက်ပီး ခေါင်းမှ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တလက်စတည်း ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီ ကိုလည်း ခါးပတ်ချွတ် ဇစ်ဖြုတ်ကာ အောက်ကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်တယ် ။ အရမ်းညောင်းနေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် လီးက ချက်ချင်း ငေါက်ကနဲ အပေါ် ကို ထောင်တက်လာတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက ကုတင်စောင်းမှာ တင်ပလင် ချိတ်ကာ ထိုင်ရင်း ကျွန်နော့် ကို ကြည့်နေတယ် ။ တင်ပလင်ချိတ် ထိုင်ထားတော့ အိုးကားကားကြီးများဘေးကို ထွက်နေတယ် အဖုတ်ကိုတော့မမြင်ရ ။ စောက်ဖုတ်မွှေး တွေကတော့ ဆီးခုံ အစပ်မှာ ပေါ်နေတယ် ။ သူမ ရှေ့မှာ ပဲ ကျွန်နော့် လီးကို ကိုင်ပီး ဂွေ တချက်နှစ်ချက် လှိမ့်ပြလိုက်တယ်
အာာာ နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး´´ ကျွန်နော် လီးဒစ် ကို ဖြဲပြလိုက်တော့ သူ့ လက်ကလေး နဲ့ မရဲ တရဲ လာကိုက်ကြည့်ပီး လက်ညိုးလက်မ လေး နဲ့ ကျွန်နော့် လီးဒစ်လေး ကို အသာဖိကြည့်တယ် ။ပျစ်´´ ကနဲ အရည်ကြည်လေး ထိပ်ဝ ကို ထွက်သွားတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး သဘောကျသွားတယ် ။ ကျွန်နော် သူမ ပုခုံးမှ ကိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်တယ် ။ တင်ပလင်ချိတ်ထားတာ ပြေသွားပီး ခြေနှစ်ချောင်း က ကုတင် အောက် တွဲလောင်းကျကာ ပက်လက်လန်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် ကုတင်အောက်မှာ ဒူးထောက်ထိုက်လိုက်ပီး ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို ကားလိုက်တော့ သူမရဲ့ အဖုတ်ကြီး ပြူးထွက်လာတယ် ။ တော်တော် အမွှေးထူသော အဖုတ် ။ ဆီးခုံ အစပ်မှ အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေနား အထိ အမွှေးများက ထူထဲစွာ ပေါက်နေတယ် ။ ခနခန ရိတ်လို့ လားမသိ ။ အရမ်းသန် သော စောက်မွှေးများ ။
စောက်မွှေး တွေ ကို လက်ဖြင့် အသာဆွဲဖယ်လိုက်တော့ အောက်မှ စောက်စိ ပြူးပြူးလေး ထွက်လာတယ် ။ စောက်မွှေးတွေ သေချာ ဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ အဖုတ် က မဲ မနေဘူး ။ ကချင်မ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က အသားဖြူတယ် စောက်ဖုတ်က ဖြူမနေပေမယ့် အညိုရောက်ဘက်သန်းသလို ရှိသလိုပဲ ။ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားတွေကတော့ နီရဲရဲ အနေအထား ။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို အပေါ်ဘက်ကို ထောင်လိုက်ပီး ကားပေးလိုက်တော့ အောက်ဘက်က စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ပါတွေ့လိုက်ရတယ် ။ စအို အ၀မှာပင် အမွှေးတွေ တစ်ပင်စနှစ်ပင်စ ပေါက်နေသေးတယ် ။ ဆီးခုံအပေါ် အစပ်လောက်မှတော့ ကလေး မွေးတုန်းက ခွဲမွေးထားဟန်ရှိတယ် ကန့်လန် ပြတ် အမာရွတ် ခြောက်လက်မခန့်ရှိတယ် ။ ကျွန်နော် ဒူးထောက်လျှက် အနေအထားကပင် စောက်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသား အဖတ်လေးတွေကို ဖြဲလိုက်ကာ လျှာအပြားလိုက် အဖုတ်ပေါ် တင်လိုက်တယ်
အားးးး…မောင်လေ…´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
ပလက်…ပလက် ..ပလက်´´ အားးး အင်းးးးး ကောင်းတယ် မောင်လေး အားးးးရှီးးးးး´´
ကျွန်နော် လျှာက စောက်ဖုတ်တင်မဟုတ် စောက်ဖုတ်နှင့် လက်တလုံးခြားသာ ရှိတဲ့ စအို ညိုတိုတို ခရေပွင့် အထိ ပါ အလျှားလိုက် ဆွဲဆွဲ ပီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက်က ပေါင် နှစ်ဘက်ကို ရှေ့ သို့ တွန်းကန်ပေးထားသလို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးကလဲ သူမ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဘက်မှ လှမ်း၍ ဒူးကောက်ဝတ်နားကို လှမ်းကိုင်ကာ ဆွဲ ထားတော့ တင်ပါးကြီးက အပေါ်ကို ခပ်မြောက်မြောက် အနေအထားဖြစ်နေတယ်
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်
အားးးး မောင်လေးရယ် ကောင်းနေပီ အားးးးးး´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
အားးးး ဟုတ်တယ် အတွင်း ထဲကို လျှာ နဲ့ ထိုးပေး အားးးးအရမ်းကောင်းတယ်´´ ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက် ကို စောက်ဖုတ် ဘေးသား နုတ်ခမ်းတွေ ကို ဆွဲဖြဲလိုက်ကာ အဖုတ်ထဲသို့ လျှာကို ထိုးထိုးပီး ထည့်ကာ ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ တင်ပါးကြီးကြီး ပေါင်တံကြီးကြီး ကြားထဲမှာ ကျွန်နော် မျက်နှာတစ်ခုလုံး နစ်မြုပ်နေသလိုပဲ ။ စောက်ပတ် အနံအသက် သိပ်မရှိ သေချာသန့်စင်ထားပုံလဲရတယ် ။ ညှီစို့စို့ အဖုတ်နံက တော့ ရှိတယ် ။ ပြွတ် ပြွတ် ´´
တချက်တချက် စောက်စိ ကို နုတ်ခမ်းသားဖြင့် ဖိဖိ ကိုက်သလိုမျိုးလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်
အားးးး ကောင်းတယ်မောင်ရယ် … မမ ပီးတော့မယ်ထင်တယ် ´´ ပလက် ပလက် ပြွတ် …ပြွတ်´´
အားးးးး ကောင်းတယ် မောင် အားးးးထွက်ကုန်ပီ အားးးထွက်…ထွက်ကုန်ပီ´´ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် ငြီးတွားသံတွေကျယ်လာကာ သူမ စောက်စိကို သူမ လှမ်းပွတ်ရင်း အဖုတ် အခေါင်း အတွင်း မှ အရည်တွေ ညှစ်ညှစ်ချတယ် ။ ကျွန်နော် ယက်ပေးနေတာ ကို အသာ ဖယ်လိုက်ပီး အဖုတ်ကို သေချာကြည့်နေမိတယ် ။ အဖုတ် အတွင်းသားများမှ လှုပ်စလှုပ်စိ ဖြင့် အရည်ကြည်လေး တွေ စိမ့်စိမ့် ကျလာတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် မလိုးရသေးခင်မှာ ပင် တစ်ချီ ပီးသွားခြင်း ဖြစ်သည် ။ စဉ်းစားမိသလောက် အဖုတ် အယက် မခံရတာ ကြာနေပီ ဖြစ်ပီး အဖုတ် အယက် ခံလိုက်ရတာ ကြောင့် ချက်ချင်း ဆိုသလို စိတ်တွေ မြောက်တက်ကာ ပီးသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ။ အားးး မောင်လေး အရမ်းကောင်းတာပဲ .. တကယ်ကောင်းတယ် ပီးသွားတယ်´´
ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာဖြင့် ကျွန်နော့် ကို ခေါင်းထောင်ကြည့်ကာ ပြောတယ် ။ ကုတင်ဘေးမှ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဂါဝန် ကို ယူကာ ကျွန်နော် နုတ်ခမ်းမှ စောက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပီး မတ်တပ် ထရပ်လိုက်တယ်
မမ တစ်ယောက်တည်း ပီးနေကောင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူးနော် ´´ ကျွန်နော့် လီး ကို လက်ဖြင့် ဂွေလိမ့်ပြလိုက်တယ် ။ အင်းပါ မမ သဘောပေါက်ပါတယ်နော်´´
ပက်လက် လှန်နေရာမှ သူမ လက်ကို ကျွန်နော့်ဆီ ကမ်းပေးတာ နဲ့ ကျွန်နော် ဆွဲထူလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော် က ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ် အနေအထား သူမက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျှက်အနေအထား ကျွန်နော့်လီးက သူမ မျက်နှာနှင့် တတန်းတည်း ။ ထို့နောက် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော့် လီးတံဆီကို လက်လှမ်းလိုက်တယ်
ပွမ်…ပွမ်´´ ကျွန်နော်ရော ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကော လန့်ဖျန့် သွားတယ် ။ အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံ ။ ကျွန်နော် ဘေးနားမှာ ချွတ်ထားသော ဘောင်းဘီ ကို အမြန်ကောက်ဝတ် သူမကလည်း ဘေးမှ ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ လျှို ၀တ်ကာ အခန်းအတွင်း မှ အိပ်ယာခင်းတွေ သေချာပြန်ဖြန့် ကာ ဧည့်ခန်း ကို ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာလိုက်တယ် ။ပီးတော့ ကျွန်နော်လည်း ရုပ်တည်တည် ဖြင့် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေလိုက်ပီး သူမက တော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကို သွားဖွင့်ပေးတယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာတာ လည်း မြန်လိုက်တာ လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးပီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်နော် တို့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ လေးဆယ့် ငါးမိနစ် ကျော်သွားတာ သိလိုက်ရတယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ် ကျွန်နော် နဲ့ ဂျာကြီး အလုပ်ကိစ္စ တွေ ပြောဆိုပီး ပြန်လာဖြစ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ညီတော်မောင်ကတော့ အဆင်မပြေဘူး ။ အခန်းကို ပြန်ရောက်မှ ပဲ ကျွန်နော် ဂွေလိမ့်လိုက်ရင်း အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရတယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ကျွန်နော် ပိုင်နေပီလေ ။ တစ်ရက်ရက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ ။ အခွင့်အရေးသာမယ့်နေ့ ကို စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဒီကြားထဲ ဂျာကြီး ကို ကျွန်နော် မျက်နှာချို သွေးကာ အလုပ်ကိစ္စ တွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနေခဲ့တယ် ။ ခက်တာ တခုက ဂျာကြီး နဲ့ ရုံးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တိုင်း သူ့မိန်းမ စောက်ဖုတ် ကြီး ပြေးပြေးမြင်နေမိတယ် ။ ဂျာကြီးမိန်းမကို ကျွန်နော် ဂျာ ပေးထားတာကိုတော့ ဂျာကြီးကတော့ မသိရှာ။ တစ်ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့ နေ့လည်ခင်း ကျွန်နော့်အခန်းမှာ အခန်းအောင်းပီး အိပ်နေတုန်း ဂျာကြီး ဆီက ဖုန်းလာတယ် ။ ဂျာကြီး အိမ်ကို သွားဘို့ ကို အလုပ်ကိစ္စက လည်း မရှိဖြစ်နေတာ။ ဂျာကြီးက ညနေ ဂေါက်ရိုက်ချိန်းထားတာ သူ့မိန်းမ ကလည်း သူ့ သူငယ်ချင်း အိမ် ကိစ္စ ရှိလို့ သွားစရာရှိနေလို့ ကျွန်နော့် ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ် ။ သူ့မိန်းမ ကား ခနလိုက်မောင်းပေးပါဆိုပီး အကူအညီတောင်းလာတယ် ။ ညီလေး ညနေ လေးနာရီလောက် လာခဲ့ပေးပါကွာ ကူညီပါဦး အကိုလည်း ချိန်းထားပီးသားကြီး ဖြစ်နေလို့ မင်းအမ ကို ကားလိုက်မောင်းပို့လိုက်ပါဦး အားတယ် မလားညီလေး ´´
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာကြီး ကျွန်နော် လာခဲ့လိုက်ပါ့မယ် ´´ အေးအေး ကျေးဇူးညီလေးရာ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် မင်းအမ က တစ်နေရာ သွားရင် အရမ်းကြာတတ် လို့ ညီလေး စိတ်တော့ ရှည်ပေးပါ ´´
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာကြီး ကျွန်နော် အဆင်ပြေပါတယ် ´´ ဂျာကြီး ဖုန်းချသွားပီး ကျွန်နော်လည်း ချက်ချင်း မြို့ အစွန်က ကျွန်နော့် အသိ တည်းခိုခန်း ကို ဖုန်းဆက်ပီး ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက်တယ် ။ ဒီကိစ္စ က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အကွက်မှန်း ကျွန်နော် သိတယ် ။ ဂျာကြီး ဂေါက်ရိုက်နေတဲ့ အချိန် အပြင်ထွက်ဘို့လုပ်တယ် ဆိုကတည်းက ကျွန်နော် ဘာဆိုတာ သဘောက်ပေါက်လိုက်တယ် ။ ညနေ သုံးနာရီ ခွဲ ကတည်းက ကျွန်နော် ဂျာကြီး အိမ်ကို ရောက်သွားတယ် ။ အိမ်ထဲ ၀င်လိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို မတွေ့ ဂျာကြီးက ဂေါက်ရိုက်သွားဘို့ ပြင်ဆင်နေပီး ဂေါက်ဖ် အိတ်တွေ ကားပေါ် တင်နေတယ် ။ ကဲ ညီလေး ရေ မင်းအမ ကို ခန စောင့်လိုက်ဦး မပီးသေးဘူး ကိုယ်တော့ သွားနှင့်တော့မယ် နောက်ကျနေပီ ´´ ဆိုပီး ကားမောင်းထွက်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းမှာ ပဲ ထိုင်စောင့်လိုက်တယ် ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ထွက်လာတယ် ။ ကျွန်နော့် မျက်လုံးတွေ သူမ အလှပေါ် ကျရောက်သွားတယ် ။ မြန်မာ ၀တ်စုံ အပြာဝမ်းဆက် ကို ကြပ်ညပ်နေအောင် ၀တ်ထားတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး
အားးး မမ အရမ်းလှတာပဲဗျာ ´´ ကျွန်နော့် နုတ်က အမှန်တကယ် ပင်ရေရွတ်မိသွားတယ် ။ တကယ်ပဲလဲလှပါတယ် ။ ဆံပင်တွေကို နောက်ဘက်မှာ ဆံထုံးထုံးထားပီး ခါးတိုမြန်မာဝတ်စုံဖြင့်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ။ အောက်က ထမိန်စကပ် ခပ်ကြပ်ကြပ်ကြောင့် တင်ပါးတွေက တင်းထွက်နေအောင် ကားနေတယ် ။ ကျွန်နော်သူမဆီ ထသွားပီး ခါးလေး ကို အသာဖက်လိုက်တယ် ။ သွားးးခြံတံခါး သွားပိတ်ဦး´´
ဟင် မမ အပြင်သွားမယ်ဆို´´ မသွားဘူး မင်းဂျာကြီး ကို ညာလိုက်တာ ငါ့မောင်ကို တွေ့ချင်လို့ ခြံတံခါးကော အိမ်တံခါးကော ပိတ်ခဲ့´´
တော်တော် အကြံပိုင်တဲ့ မိန်းမ ပဲ ။ ကျွန်နော် ချီးကျူးလိုက်မိတယ် ။ အမှန်တော့ ဘယ်မှ သွားစရာမရှိ ။ ကျွန်နော့် ကို အိမ်ရောက်လာအောင် ကြံစည်ခြင်းပင် ။ ဒီနေ့က ဂျာကြီးက ဂေါက်ဖ်ပွဲ ပီးရင် ညစာစားပွဲ ပါ ဆက်ဦးမည်တဲ့ ။ ဒါဆို ကျွန်နေ်ာ တို့ အတွက် အချိန် လေးငါးနာရီလောက် ရမည်။ ကျွန်နော် တံခါးတွေ ပိတ်ပီး အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဧည့်ခန်းမှာ မရှိတော့ ။ အခန်းထဲကို ကျွန်နော် တခါတည်း လိုက်သွားလိုက်တယ် အခန်းတံခါးက မပိတ်ထား ။ အခန်းထဲ ၀င်ဝင်လိုက်ချင်းပဲ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော် ကို လာဖက်တယ်
လွမ်းနေတယ် မောင်လေး …´´ ကျွန်နော် အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်လိုက်ရင်း နုတ်ခမ်းချင်း အနမ်းတွေ ဖလှယ်လိုက်တယ် ။တစ်ခါ ဖောက်ပြန်ဖူးသော မိန်းမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ နောက်တခါအတွက် မ၀ံ့မရဲ မဖြစ်တာ ဆန်းကြယ်သော ကိစ္စမဟုတ်။ ယောကျားတစ်ယောက် အပေါ် မှာ ၀င်ငွေအရ အမှီအခိုကင်းတဲ့ မိန်းမ တော်တော် များများ ဖောက်ပြန်ကြတာဟာ သူမ တို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ များကြောင့် ဆိုတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခု ရှိတာ ကျွန်နော် ဖတ်ဖူးတယ် ။ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း သူမရဲ့ လိုအင် မပြည့်ဝမှုတွေကြောင့် ဆိုတာ မလွဲမသွေဖြစ်နေနိုင်တယ် ။နမ်းနေရင်းမှပဲ ကျွန်နော့် ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးပုံ ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ဒီနေ့ ကျွန်နော် တမင် ဘောင်းဘီ ၀တ်မလာတာ ။ ပုဆိုးဖြင့်သာလာခဲ့တယ် အောက်ခံဘောင်းဘီတော့ ၀တ်ခဲ့ရတယ် တော်ကြာ အပြင်သွားရင်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင် အရှက်ကွဲမှာ ဆိုးလို့ ။နုတ်ခမ်းတွေ နမ်းနေရင်း နဲ့ပဲ ကျွန်နော့် အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှနေ၍ ကျွန်နော့် လီး ကို လာပွတ်ပေးနေတယ် ။ သူမ ပုံခုံးတွေ ကို ကိုင်လိုက်ပီး အောက်ကို ဖိချလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျှက်သား အနေအထား ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်လို့ သာတော်သေးတာ ။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်လို့ကတော့ ထမိန်စကပ်တောင် ကွဲ ပြဲသွားနိုင်တယ် ။ လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက ဖုထစ်နေတယ် ။ သူမ ဘာလုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာ သိရှိနေတယ်။ ကျွန်နော့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုး ထဲ ကို လက်အသာ နှိုက်ပီး အောက်ကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော့် လီး ကို လက်တဘက်က ကိုင်ရင်း သူအကျင့်အတိုင်း နောက်လက်တဘက်မှ လက်မ လက်ညိုးလေး ဖြင့် လီးဒစ် ကို လာဖိတယ် ။ ပြီးတော့ ကျွန်နော့် ကိုမော့ကြည့်ပီး နီထွေးထွေး နုတ်ခမ်နီ ဆိုးထားတဲ့ နုတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့် သပ်လိုက်ရင်း မျက်စိတဘက် မှိတ်ပြလိုက်သေးတယ် ။ ထို့နောက် ကျွန်နော့် လီးဒစ်ကို ဖြဲကာ နုတ်ခမ်း အစုံဖြင့် ငုံစုပ်တော့တယ် ။ လီးတံ တစ်လျောက် နွေးကနဲ အရသာ ခံစားလိုက်ရတယ် အားးးး မရယ် ..ကောင်းလိုက်တာ ´´
ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ ကျွန်နော် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရဲ့ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို လီးထိုးထည့်ကာ လိုးပြစ်လိုက်တယ်။ ဘေးက မှန်တင်ခုံစာပွဲ မှ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ထဲတွင် မြန်မာဝတ်စုံ အပြာဝမ်းဆက်လေးဖြင့် ဒူးထောက်ကာ ကျွန်နော်က မတ်တပ်ရပ် အနေအထားဖြင့် ပါးစပ်ကို အားရပါးရ လိုးနေတာ ပေါ်နေတယ် ။ကျွန်နော့် ဂွေးဥတွေကို ကိုင်ပွတ်လိုက် လီးတံ ကို ကိုင်လိုက်ဖြင့် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ။ ဗြွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
အု အု အု ..အ..ဘွတ် ဘွတ်´´ လီးတံ တလျောက် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တံတွေး တွေ ရွဲနစ်လာပီး သူမ ပါးစပ်မှ တဆင့် လည်ပင်း များထိပါ စီးကျနေတယ် ။ သူမ နုတ်ခမ်း နီတွေလည် ပျက်စ ပြုလာပီ ။ကျွန်နော် အားပြု ပီး ထိုးသွင်းနေချိန် သူကလည်း နုတ်ခမ်း ကို ဖိဖိ ပီး လီးတံ ကို ငုံခဲ စုပ်နေတယ် ။ ဆယ်မိနစ်လောက် လုပ်ပီးသွားတော့ သူလည်း မောလာတယ် ထင်တယ် လီးတံကို ပါစပ်က နေချွတ်လိုက်ပီး ကျွန်နော် ကို မော့ကြည့်တယ် ။ လက်ကတော့ ကျွန်နော့် လီး ကို ဂွင်းထုပေးနေတယ် .။ နုတ်ခမ်း တလျောက် နဲ့ လည်ပင်းတွေ မှာ တံတွေး တွေရွဲနစ်လို့ ။ ကျွန်နော့် လီးတံမှာ လဲ ရွဲနစ်နေပီ ။ ကျွန်နော် စိတ်ကူး ရတာ နဲ့ သူမ ပါးနှစ်ဘက်ကို လက်နဲ့ ဖိဖျစ်လိုက်တော့ ပါးစပ်က ဟလာတယ် ။ ကျွန်နော် ပျစ်က နဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ တံတွေး ထွေးချလိုက်တယ် ..ပီးတော့ ပါးစပ်ထဲကို လက်လေးချောင်း ထိုးသွင်းပီး မွှေပစ်လိုက်တယ် အားးးအားးးအားးး အု အု အု´´
ကျွန်နော့် စိတ်ထဲ သူမ ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံချင်စိတ် တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဟုတ်တယ် ဒီလို တင်ကြီးကြီး ရင်ကားကား မြန်မာဆန်ဆန် အိမ်ထောင်သည် မင်ကြီး ကြိုက် ပုံစံ မျိုးကို ကျွန်နော် အကြိုက်ဆုံးပဲလေ ၊။ မင်းကြီးတင် မကဘူး ကျွန်နော် လည်း ကြိုက်တယ်ဗျာ ။။
သူမ နောက်မှာ စည်းထားတဲ့ ဆံထုံး ကို ကျွန်နော့် လက်တဘက်နဲ့ ကိုင်က ဆွဲမလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပါလာတယ် ။ ပုံစံ ကြည့်ရတာ အဲ့လို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကြိုက်မယ်ပုံ ။ ကျွန်နော့် အပေါ် အကျီ ကို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ချွတ်ပေးတယ် ။ ကျွန်နော် က သာ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေတာ သူမ ကတော့ ဘာမှ မချွတ်ရသေး ။ ဘာမှ မချွတ်ရသေးတာကို က ကျွန်နော့် စိတ်ကို ပိုမို ထကြွလာစေတယ် ။ ကျွန်နော်က မိန်းကလေး ဆို ခေတ်ပေါ် ဆက်ဆီကျကျ ၀တ်စားထားတဲ့ မိန်းကလေး မျိုးကို လိုးရတာထက် မြန်မာဆန်ဆန် အလှ နဲ့ မိန်းကလေး မျိုးကို ပိုစိတ်ကြွတယ် ။
ကျွန်နော် ကုတင်ပေါ် မှာ ထိုင်လိုက်ပီး
အ၀တ်တွေ တစ်ခုချင်းစီ ချွတ်ပြကွာ ကြည့်ချင်တယ် ´´ နုတ်ခမ်းလေး ကွေးရုံ ပြုံးပြပီး အပေါ် အရင် ချွတ်ပြရမလား အောက် အရင် ချွတ်ပြရမလား ´´
အောက်´´ ကျွန်နော် နားကပ်လာပီး ကျွန်နော်က ကို ကျောပေးကာ ခါးနားမှာ ရှိတဲ့ ထမိန်စကပ် ဇစ်လေး ကို ဆွဲချလိုက်တယ် ။ ပီးတာနဲ့ စကပ်ဘေးသား နှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလျောချတယ် ။ တင်းရင်းကြီးမားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ထမိန်စကပ်က ဇစ်ဆွဲချထားပေမယ့် ကြပ်ထွက်နေတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တကမ်းမှာ တင် ထမိန်ချွတ်ပြနေတာ ဘယ်လောက်စိတ်ကြွလိုက်မယ်လဲ ဆိုတာသာတွေးကြည့် ။ တင်ပါးကြီးတွေကို လှုပ်ခါလှုပ်ကာ ဖြင့် အောက်သို့ ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ အားပါးးပါးးး အပြာရောင် ထမိန်စကပ် အောက် မှ အပြာရောင် ပင်တီလေး က တင်ပါးကြီး နှစ်ခြမ်းကို မနိုင်တနိုင် ထမ်းပိုးထားတယ် ။ ကျွန်နော် မနေနိုင်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီး ကို တချက်လှမ်းရိုက်လိုက်တယ် ဖြန်းးးးးးးးး´´
အ….´´ ပီးတော့ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို စုပ်နယ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ဟိတ် နေဦးလေ ဖြေးဖြေးပေါ့ တစ်ခုချင်း ချွတ်ပြမယ် အံသြစရာ လည်း ပြဦးမယ် ´´
ဆိုပီး ကျွန်နော် နားမှ နဲနဲ ခွာကာ ကျောပေးလျှက် အနေအထားမှပဲ သူမ အပေါ် အကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပီး ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ထို့နောက် ဘော်လီချိတ် အား နောက်ပြန် ဖြုတ်လိုက်ပီး ဘေးသို့ ဇာဘော်လီ အပြာရောင်လေး ကို ပစ်ချလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ကျွန်နော့် ဘက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလှည့်လာပီး နို့အုံကြီးတွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ယှက်ပီး ကိုင်ကာ အုပ်ထားတယ် ။ လက်ချောင်းလေးတွေ ကို ဖြေးဖြေးချင်း ချဲလိုက်တော့ အောက် မှ ခပ်မဲမဲ နို့သီးခေါင်း လေး ပေါ်လာတယ် ။ အားးး ဟိုနေ့က သူမ နို့ တွေ ကို မမြင်လိုက်ရ အခုတော့ မြင်လိုက်ရပီ ။ စောက်ရမ်းမိုက်တယ် ။ နို့အုံကြီးတွေကလဲ ကားထွက်နေတာပဲ
စောက်ရမ်း မိုက်တယ် မမ ရာ ´´ ဟိဟိ ´´ အသံလေး ထွက်အောင် ရီလိုက်ရင်း နို့ အုံကြီးတွေကို လက်နဲ့ လှုပ်ပြတယ်
အံသြ စရာ မယ်နော် သေချာကြည့် ´´ ဆိုပီ အောက်ခံပင်တီလေး ကို အသာလိပ်ပီး ချွတ်လိုက်တော့ အားးပါးးးပါးးးး ဟိုနေ့က စောက်ရမ်းထူပိန်းနေတဲ့စောက်မွှေးတွေ တပင်မှ မရှိ အကုန်ပြောင်စင်နေအောင် ရိတ်ထားတယ် မောင့် အတွက် ရိတ်ထားတာ ´´ တဲ့ဗျာ ..
ကျွန်နော် မနေနိုင်တော့ တင်ပါးကြီး ကို လှမ်းဖက်ကာ ဆွဲ ယူလိုက်တယ် ပီးတော့ နို့အုံတွေကို တဖက်စီ အငမ်းမရ စုပ်ပစ်လိုက်တယ် နို့အုံတွေကို လက်ဖြင့်ညှစ်လိုက် နို့သီးခေါင်းတွေ ကို စုပ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။
အားးးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် ´´ ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´
အားးးး ဒီလို ခံစားချင်နေတာ ကြာပီကွာ .. မင်းဆရာက မလုပ်ပေးတာကြာပီ ´´ နို့တွေကို စုပ်နေရာ မှ ကျွန်နော်လက်တဘက်က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကာ တင်ပါး အကွဲ ကြောင်းထဲကို လက်ခလယ် ထိုးထည့်လိုက်တယ် အားးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင် အားးးးး´´
ကျွန်နော့် လက်ဖ၀ါးထဲ ကို တံတွေး ပျစ်ကနဲ ထွေးထည့်လိုက်ပီး တင်ပါး အကွဲ ကြောင်းထဲကို နှိုက်လိုက်တယ် လက်ခလယ် က ဖင်စအို ၀ ကို အသာထည့်ကြည့်လိုက်တယ် လက်တဆစ်လောက် ၀င်အသွားမှာ သူမ စအိုအား ကျုံ့လိုက်ပွလိုက် လှုပ်နေတာ သိလိုက်တယ်။
အားးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေး ရယ် အားးးး´´ ပေါင်ကြီးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကားလာပီး လက်တွေကလည်း ကျွန်နော့် ကျောကုန်းကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်ခလယ်က လည်း စအို ၀ ထဲ ကို သွင်းတာ တဖြည်းဖြည်း နှင့် အဆုံးထိ ၀င်ထွက် လုပ်နေပီ ။ ကုတင်ပေါ် မှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် အပေါ်မှာ ခွထိုင်ထားတော့ ကျွန်နော့်လီးတံ ကြီးကလည်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပေါင်ခွကြားထဲ ပိမိနေတယ် ။ ဖင်အိုးကြီးကြီး ကို ကျွန်နော့် လက်နှစ်ဘက် နှင့် မနဲ ဖက်တွယ် ထားရတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက လဲ သူ့ အဖုတ် နဲ့ ကျွန်နော့် လီးတံ ကို အပေါ်က ခွကာ ပွတ်ပွတ် ဆွဲပေးနေတာ ရိတ်ထားကာစ အမွှေးတွေက ကြမ်းရှရှကြောင့် ကြက်သီးပါထလာတယ်။ မောင်လေး ..မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ တက်လုပ်ပေးတော့´´
မောင်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ မ ရဲ့ ဖင်တုန်းကြီးကို တက်ခွပီး လိုးချင်ပီ ဖင်ကုန်းပေးတော့နော် ´´ စိတ်ကြိုက် ပါ မောင် … မမ လည်း အထဲ က တအား ယားနေပီကွယ် ´´
ကျွန်နော့် ပေါ်မှ ဆင်းကာ ကုတင်ပေါ် တွင် ဖင်ကုန်းလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်တုန်းကြီးက တကယ် စကိုင်းအိုး ဂစ်တာရှိတ် ကြီး အယ်နေတာပဲဗျာ ။ ဘယ်လက်က တင်ပါး အစပ် နားကို ကိုင်ကာ ညာလက်ဖြင့် တင်ပါးကြီးကို ခပ်စပ်စပ်လေး ပုတ်လိုက်တော့ တင်ပါးကြီးက အိခနဲအိခနဲဗျာ ။စမန် ထ နေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် လီးတံကို အဖုတ် ၀ မှာ သေချာ တေ့လိုက်ပီး ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ်
ဘွတ် ´´ အားးးးးး မောင် …၀င်သွားပီ အားးးးးးးး´´
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် ´´
`´ အားးးး ရှီးးးး ကောင်းတယ်မောင် ´´
ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ´´ အ …အ…အားး´´
ခါးနှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ အားရပါးရလိုးနေမိတယ် ၊ တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ကျွန်နော့် ပေါင်ရင်းတွေ ဆုံလိုက်တိုင်း တဖြောင်းဖြောင်း ဖြင့် အသံတွေ မြည်ထွက်နေတယ်။စောက်ဖုတ်ကို လိုးနေရင်း ကျွန်နော့် လက်မ ကို ဖင်ဝ အတွင်းထဲ ပါ ထိုးသွင်းပေးထားလိုက်တယ်
အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးး လိုး လိုး မောင်လေး လိုးပါ ´´ အင်းးး ရော့ ရော့ ဘွတ် ဘွတ်ဘွတ် …လိုးတယ်ကွာ ..ကောင်းရဲ့လား ´´
အင်းးးး အ..အ.. အရမ်းကောင်းတယ် မောင် အားးးလိုးပါ မမ ကို လိုးပါ´´ ကျွန်နော့် လီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဖုတ်ထဲ ကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာ ကို ငုံကြည့်ကာလိုးနေရင်း တင်ပါးကြီးတွေက တအိအိ ဖြင့် စိတ်မထိန်းနိုင် တော့သဖြင့် လက်ဝါးဖြင့် တချက် ပင့်ကာ ရိုက်ချလိုက်တယ် ဖြောင်းးးးး´´
အားးးးး ကောင်းတယ် မောင် ….အားးး နာနာ လေး ရိုက်ပေး ´´ ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း ´´ ဆက်တိုက် ရိုက်ပီး လိုးပစ်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း စိတ်တွေ အရမ်း ထန်နေပုံရတယ် ။သူမ ဖင်အိုးကြီး ကို ငေးပီး မှန်းခဲ့သမျှ အခု လက်တွေ့ လိုးနေရပီလေ ။ အသားဖြူဖြူ ဖင်အိုးတောင့်တောင့် ကချင်မ အယ်စတုံကြီး ကို လိုးတဲ့ အရသာ တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ ။အချက် လေးဆယ် လောက်စောင့်လိုးပီး ကျွန်နော့်လီး ကို အဖုတ်ထဲမှ ချွတ်လိုက်တယ် ။ လီးတံတလျောက် စောက်ဖုတ်ရည်တွေ စိုရွဲပီး ပြောင်လက်နေတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်တုန်းကြီး က အယ်ထွက်နေသဖြင့် လေးဘက်ကုန်းထားသော်လည်း အောက်မှ စောက်ဖုတ်ကို သေချာမမြင်ရ ။ စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ကို သာ မြင်နေရတယ် ။ သူမ ဖင် နှစ်ခြမ်းကြားကို တံတွေး ထွေးချလိုက်တော့ တံတွေးတွေက ဖင်ဝ မှ တဆင့် စောက်ဖုတ်ဆီသို စီးကျ ကုန်တယ် ။ ဖင်ဝကိုလက်မ ဖြင့် တံတွေများ စွတ် ကာ ပွတ်လိုက်ပီး လီးဒစ် ကို စအို ၀ ကို တေ့လိုက်တယ် ။ လီးဒစ်ဖြင့် စအိုဝ ကို ပွတ်ရင်း
ဖင်လိုးမယ်နော် ´´ ဖြစ်ပါ့မလား မောင်လေး တခါမှ မခံဖူးသေးဘူး´´
ဟုတ်လား ဒါဆို အသစ်ကလေးပေါ့ အဲ့လို မှ ပိုချချင်တာ ´´ ဖြေးဖြေးနော် မောင် … ´´
မဖြေးဘူး အကြမ်းလိုးမယ် ခံပေး … ´´ ဖြောင်း …´´
တင်ပါးကို တချက် ခပ်ပြင်းပြင် ရိုက်ချလိုက်တယ် ။
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ´´ တင်ပါးကို လေးငါးချက် ဆက်တိုက် ဆင့်ရိုက်ပေးလိုက်တယ် ။ အင့်…..ဘွတ် ´´
လီးဒစ်က ဖင်ဝ အတွင်း ဘွတ်ကနဲ့ ၀င်သွားတယ် တော်တော်ကြပ်သား။ ဒစ်ဝင်သွားတဲ့ လီးတံပေါ်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်ပီး လီးတံ အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ ဖင်သားလေးက လီးတံ နှင့် အတူ အတွင်း သို့ အိဝင်သွားတယ် ။
အားးးးး နာတယ် အားးးးးမောင်လေး အားးးးကျွတ် ကျွတ် ´´ အော်သံကြောင့် ကျွန်နော့် မှာ ပိုစိတ်ထန်လာပီး လီးကို ထုတ်သွင်း မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ဝ အတွင်းမှ လေအံသံတွေပါ ထွက်လာတယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် …´´ အားးး အားးးး ကျွတ် ကျွတ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ နော် အားးး´´
ကျွန်နော့် ခါးအား ကို စိုက်သုံးပီး တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန် ထုတ်သွင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ တဖြည်းဖြည်း လီးတံတလျောက် အရည်တွေဖြင့် ချောမွေ့လာတယ် ။
တင်ပါးတွေ ကို ရိုက်လိုက် စောင့်စောင့် သွင်းလိုက် ဖြင့် စည်းချက် ညီညီ စောင့်ထိုးပေးနေမိတယ်
အားးး မောင် … ဟုတ်တယ် ကောင်းလာပီ ´´ သူမ လက်တဘက်က အဖုတ်ကို လှမ်းပွတ်ရင်း ငြီးငြူသံ တွေ ထွက်လာတယ် အခု ဆိုရင် ကျွန်နော့် အပေါ် ကြောထားတဲ့ ဂျာကြီး ကို မြင်ယောင်မိရင်း သူမိန်းမ ကို ဖင်ပါ လိုးပေးလိုက်ရပီ ။ နောက် ဆို ဂျာကြီး ဘယ်လို ကြောကြော လက်ခံနိုင်ပီဗျာ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဆံပင်တွေ ကို လှမ်းဆွဲ လိုက်ရင် ဖင်ဝ ကို အားပါပါ ဖြင့် စောင့်စောင့်လိုးပေးနေတယ် အားးးး အားးးးး´´
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ´´
အားးးးကောင်းတယ် မောင် အားးးစောင့်လိုးပေး´´ အင်းးးး ရော့ေ၇ာ့ အားးး မခိုင် ဖင်ခံလို့ ကောင်းလား အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ကောင်းနေပီမောင်လေး အားးး လိုးပေး´´ ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´
ဖြောင်း ဖြောင်းဖြောင်း ´´ ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´
ဆက်တိုက် လိုးရင်း လိုးရင်း ကျွန်နော့် လီးတံ က ပူလာတယ် အထဲက လဲ ကျဉ်တက်လာတယ် ။
အားးး မမ ကျွန်တော် ပီး ချင်နေပီ ´´ ကျွန်နော့် လီးတံ ကို ဖင်ထဲမှ ချွတ်လိုက်ပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးကို ဆံပင်မှ ဆွဲကာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်နှာပေါ် မှာ လီးတံတေ့ရင်း ဂွင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထုပစ်လိုက်တယ် ။ အားးး မမ လျှာထုတ်ထားးးး ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်မယ် ´´
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပါးစပ်လေးဟ လာပီး လျှာလေး ထုတ်လာတယ်
လျှာပေါ် ကို လီးထိပ်တင်ပီး ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထုလိုက်တာ ၂ မိနစ်လောက်ပဲ ထုလိုက်ရတယ် ကျွန်နော့်လီးတံ ထိပ် မှာ ဖြူပျစ်ပျစ် လရေ တွေ အခဲလိုက် ထွက်ကျလာတယ်။ လရေတွေက ပါးစပ်ထဲတ၀က် ပါးပေါ် မေးစေ့ပေါ် နုတ်ခမ်းပေါ် အနှံ ပျံ့ကျဲ ကုန်တယ် ။
အားးးး ကောင်းလိုက်တာ မ ရယ် ´´ လူဆိုး … ဒီမှာ အကုန်ပေပွကုန်ပီ´´
ကျွန်နော် ဘေးမှ ကျနေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပင်တီ အပြာရောင်လေး ကို ကောက်ကာ မေ့စေ့ နဲ့ ပါးတွေပေါ် ပေနေတဲ့ ကျွန်နော်လရေတွေကို သုတ်ပေးလိုက်တယ် ။
မကြိုက်ဘူးလားးး ´´ သွားပါ ကြိုက်ပါဘူး ဖန်တွတွ နဲ့ ´´
ရော့ ပြောင်အောင် ယက်ပေးဦး ´´ ကျွန်နော့် ရဲ့ နဲနဲ ပျော့ သွားတဲ့ လီးတံ ကြီး ကို သူမျက်နှာရှေ့ ထိုးပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးတံကို ကိုင်ရင်း လီးတံ တလျောက် လျှာဖျားလေး ဖြင့် ယက်ကာ အရည်တွေကို ပြောင်အောင် လုပ်ပေးတော့တယ် ။ ကျွန်နော့် လက်မှ နာရီ ကို ကြည့်လိုက်တော့ နာရီက ငါးနာရီ မတ်တင်း ပဲရှိသေးတယ် ။ နောက်ထပ် အချိန် သုံးနာရီလောက် ရသေးတာပဲ။ ကျွန်နော် ဂျာကြီး အိပ်ယာ ပေါ် မှာ အေးဆေးစွာ အနားယူ ပက်လက်လှန်လိုက်တယ် ရေသွားဆေးဦးမယ် ခန ´´
ဆိုပီး ကုတင်ပေါ်မှာ ဆင်းက ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်ကြီး နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြင့် လျောက်သွားတယ် ။ အသားဖြူဖြူ တင်ပါးတွေမှာ ကျွန်နော် ရိုက်ထားလို့ နီစပ်စပ် ဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရေချိုးခန်းမှ ပြန်ထွက်လာတယ် . ကိုယ်လုံးတီး နဲ့ပဲ ကျွန်တော့် ထံ လျောက်လာပီးး
အမောဖြေထားဦး အအေး သောက်မလား ´´ အင်းးး ´´
အိမ်ရှေ့ခန်းကို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အ၀တ်ဗလာဖြင့် ထွက်သွားပီး ရှပ်ဘူး တစ်ဘူး ကိုင်ကာ ပြန်ဝင်လာတယ် ။ ရှပ်ဘူးအေးအေး လေး သောက်လိုက်ရင် ကုတင်ပေါ် လှဲလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကလည်း ဘေးမှာ လာဝင်လှဲတယ် ။
ကျွန်နော့် လက်မောင်းပေါ် မှာ ခေါင်းအုံးရင်း သူမ ခြေထောက်က ကျွန်နော့် ကို လာခွထားတယ် ။
ဖင် ၀ နဲနဲ ပြဲသွားလားမသိဘူး ရေဆေးတာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း နဲ့ ´´ ဘယ်လိုလဲ ဖင်ခံလို့ ကောင်းလား ´´
သိဘူး နာနာ ကြီး ´´ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးတွေ ကို လှမ်းပွတ်လိုက်ရင်း နောက်တခါ ဖြေးဖြေးလေး လိုးပေးမယ် မကြမ်းတော့ဘူးနော် ´´
အင်းးး ရပါတယ် ကြမ်းကြမ်းလေး လဲ ကြိုက်တယ် ´´ အင်းးး မောင်တို့ နောက်တခါလည်း တွေ့ချင်သေးတယ်ကွာ ´´
အင်း စီစဉ်မှာပေါ့လို့ မောင်နဲ့ လိုးရတာ အရမ်းကောင်းတယ် ´´ အခုလည်း ခနနေ ထပ်လိုးမယ်နော် ´´
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း ရမ္မက်တော်တော် ထန်တယ် ။နောက်တချီ ထပ်လိုးကြတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မှ အပေါ်က တက်ခွ စောင့်လိုက် ပက်လက် လိုးလိုက် ဖင်ကုန်းလိုက်နဲ့ အားပါပါ ဆက်လိုးကြတယ် ည ၇ ခွဲ ကျော်ကျော် လောက်မှာ ကျွန်နော်လည်း အိမ်က နေ ပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ။ နောက်ပိုင်း ၂ ပတ် တခါ လောက် အပြင် မှာ အကြောင်း တစ်ခုခု ပြ ပီး လိုးဖြစ်ကြတယ် ။ သုံးလေးလ လောက် အတွင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးနဲ့ ဆယ့်ငါးကြိမ်ထက်မနည်း လိုးဖြစ်ကြတယ် ။ ဂျာကြီး ကတော့ သေချာ မသိရှာ ။ နောက် လေးလ လောက်မှာ ကျွန်နော် ရာထူးတိုး နဲ့ နေပြည်တော် ရုံးချုပ် ကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကျတယ် ။
နေပြည်တော် ရောက်ပီး နောက်ပိုင်း တခါပဲ တွေ့ ဖြစ်လိုက်တယ် ဂျာကြီး အစည်းအဝေး လာတက်တာ ကို လိုက်လာတာ ။ လိုးတော့မလိုးဖြစ်တော့ဘူး ။ သူနဲ့ မခွဲ ခင် ပြောသွားသေးတယ် တစ်ရက်လောက် ဆုံဖြစ်အောင် ဆုံချင်သေးတယ် လွမ်းနေတယ်တဲ့ ကျွန်နော့် နားကို ခပ်တိုးတိုးလာပြောသွားတယ် ။ကျွန်နော် လိုးဖူးခဲ့သမျှ ထဲ အမှတ်အရဆုံးတစ်ယောက်က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးပါ ။ ဒီနေ့ အချိန် ထိ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို မှန်းပီး တခါတခါ ဂွင်းထုဖြစ်တုန်းပဲ ။ အခု ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက ကလေးသုံးယောက်တောင်ရသွားပီ ။ သားနှစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သူတို့မိသားစု ပုံတွေ ခနခန တွေ့ ဖြစ်တယ် ။ ဂျာကြီးကလည်း သိပ်တော့ ခေသူ မဟုတ်ပဲ ။ ကလေး သုံးယောက်လုံးက ဂျာကြီး မျက်နှာပေါက်နဲ့ဗျ ။ ကျွန်နော် လည်း တချိန်ချိန် တနေရာရာမှာ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နဲ့ လိုးချင်သေးတယ်ဗျာ ။ ပြန်ပီး တွေ့ဖြစ် လိုးဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးကြပါဦးလို့…….
အ ရမ်း တော် တဲ့ ထောက် လှမ်း ရေး ကို ကို
မော်ဒယ်မလေး လဲ့ချို “”